Akwụkwọ ịhụnanya iri kachasị mma n'akụkọ ihe mere eme iji mee ka ị daa n'ịhụnanya ọzọ | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ ịhụnanya 10 kachasị mma n’akụkọ ihe mere eme iji mee ka ị daa n’ihu ọzọ
Berkwụ Alberto | | Akwụkwọ, Akwụkwọ, ọtụtụ
Ima edi odudu oro onụkde ererimbot. Mmetụta na-adịghị agwụ agwụ nke zụlitere ọtụtụ n'ime akụkọ ihe mere eme nke akwụkwọ na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ kachasị na-ere ahịa na ụlọ ahịa anyị. Agaghị ekwe omume hụrụ n'anya, ndị ọzọ epic, ụfọdụ ezigbo ma niile agaghị echefu echefu mebere ndị na-esonụ akwụkwọ ịhụnanya kacha mma.
1 Akwụkwọ ịhụnanya 10 kachasị mma
1.1 Mpako na ajọ mbunobi, nke Jane Austen dere
1.2 Agbamakwụkwọ ọbara, nke Federico García Lorca dere
1.3 Jane Eyre, nke Charlotte Brontë dere
1.4 Wuthering Heights, nke Emily Brontë dere
1.5 Gara site na ifufe, nke Margaret Mitchell dere
1.6 Hụnanya n'oge nke Ọrịa ọgbụgbọ, nke Gabriel García Márquez dere
1.7 Dị ka mmiri maka chocolate, nke Laura Esquivel dere
1.8 Anna Karenina, nke Leo Tolstoi dere
1.9 South nke oke, ọdịda anyanwụ nke Sun, site n'aka Haruki Murakami
1.10 Dọkịta Zhivago, nke Borís Pasternak dere
Akwụkwọ ịhụnanya 10 kachasị mma
Were dị ka otu n'ime nke mbụ ide akwụkwọ ịhụnanya, nke bu otu n’ime masterpieces nke narị afọ nke XNUMX leta ndị Bekee na-aga n'ihu na-abụ kpochapụwo mgbe ochie. Akụkọ banyere ụmụ nwanyị nwanyị Bennett na-achọ di zuru oke abụghị naanị otu n'ime akụkọ kachasị atọ ụtọ a na-echeta, mana ọ na-ebuga anyị dị ka ndị ọzọ ole na ole na ụwa nke ọha mmadụ nke oge ahụ iji mikpuo onwe anyị na ụwa nke oriri, furtive zutere na omiiko ejije nke ga-akpali ihe karịrị otu narị afọ gasịrị Helen Fielding na akwụkwọ Bridget Jones ya.
Agbamakwụkwọ ọbara, nke Federico García Lorca dere
Agbamakwụkwọ nke Ọbara nke ...
Site n'ike mmụọ nsọ nke ezigbo ikpe mere na mpaghara Almería ma dee ya na 1931, agbamakwụkwọ ọbara bụ naanị egwu Lorca bipụtara na usoro akwụkwọ nyere nnukwu ihe ịga nke ọma ọ rụpụtara. N'ịbụ onye nwere mmetụta dị egwu nke dabara akara niile nke Lorca dị ka ịnyịnya ma ọ bụ ọnwa, Bodas de sangre na-echeta ụbọchị agbamakwụkwọ nke nwunye, onye jụrụ ịlụ Onye na-alụ nwanyị ọhụrụ ahụ dọkpụrụ site n'ike enweghị nkọwa na-adọta ya Leonardo onye hụrụ n'anya. Egwuregwu ahụ nwere ihe ịga nke ọma na-enweghị oge na-ewusi ike ihe mmegharị ihe nkiri 2015 nke Inma Cuesta mere.
Jane Eyre, nke Charlotte Brontë dere
N’afọ Charlotte Brontë bipụtara akwụkwọ a, n’afọ 1847, a naghị ele ụmụ nwanyị na-ede akwụkwọ anya dị ka nke ọma taa. N'ihi nke a, Brontë bipụtara ọrụ ahụ n'okpuru aha aha ya bụ Currer Bell. Omume ya, Jane Eyre, dị ka onye edemede, nwa agbọghọ nke emegburu onwe ya site na ndụ, na-achọsi ike ịchọta ọnọdụ ya n'ụwa, na "ihe" nke, n'ụzọ ziri ezi, mere ka ọrụ a gafee na ọha na-abụghị ndị na-ekwekọghị ekwekọ. Ọrụ ahụ bụ ihe ịga nke ọma zuru oke mgbe ebipụtara ya, na-ekpughe onye bụ Charlotte Brontë na nwanyị nke ga-ejedebe na narị afọ nke XNUMX.
Wuthering Heights, nke Emily Brontë dere
Egwuregwu Elu: ...
Ọtụtụ na-atụle ya ọrụ kachasị mma na akụkọ ntolite, na ha nwere ike ọ bụghị ihe ọjọọ. Edere site n’aka Emily Brontë, nwanne nwanyị Charlotte ahụ e kwuru n’elu, Wuthering Heights na-akọ akụkọ banyere Heathcliff, nwata nwoke ebubatara n’ụlọ Earnshaw na ala Wuthering Heights, bụrụ onye ọkachasị enyi na nwa ya nwanyị, Catherine. A akụkọ nke mmegwara, ịkpọasị na ịhụnanya gbara ọchịchịrị, Wuthering Heights ndị nkatọ jụrụ mgbe ọ bipụtara ya na 1847 site ya Ọdịdị n'ụdị matryoshka, na-ewere "akaghi aka" site n'ozuzu echiche. Ka oge na-aga, ndị nkatọ ga-amata ọdịdị ọhụụ nke ọrụ ahụ, na-eme ka ọ bụrụ nnukwu ọrụ ọ bụ.
Gara site na ifufe, nke Margaret Mitchell dere
Ihe ifufe ga ...
Akụkọ ifo akụkọ ifo Akara O'Hara na Rhett Butler n'oge a na-alụ agha obodo na America na 1936. N'ime oge Krismas nke afọ ahụ, akwukwo ahu gara ere rue nde ihe nrite nke Pulitzer maka Mitchell, bụ onye matara karịa onye ọ bụla iji mepụta ọnọdụ dị mma nke ọ bụ otu n'ime ya akwụkwọ ịhụnanya kachasị mma nke akwụkwọ ndị America. Omuma nke ejiri ikike ya mekwuo elu mmegharị ngosi ama ama ama ama 1939 nke Vivien Leigh na Clark Gable mere.
Hụnanya n'oge nke Ọrịa ọgbụgbọ, nke Gabriel García Márquez dere
Hụnanya n'oge ...
Ọ bụ ezie na Afọ isii nke owu ọmụma bụ ọrụ nke Gabo si wee bụrụ otu n'ime ndị edemede ukwu nke akụkọ ntolite, Lovehụnanya n'oge ọgbụgbọ ọgbụgbọ bụ akwụkwọ akụkọ kachasị amasị ya. Ghotara site na-ede akwụkwọ Colombian onwe ya dị ka ọrụ kacha amasị ya, akụkọ ịhụnanya nke Florentino Ariza na Fermina Daza, nwunye dọkịta Juvenal Urbino, n'otu obodo dị n'ụsọ mmiri Colombia ga-agbada na akụkọ ihe mere eme nke akụkọ ntolite ya maka aghụghọ, ike na njedebe nke na-akọwapụta ihe kacha mkpa nke ọrụ ahụ . N'ike mmụọ nsọ site na akụkọ ịhụnanya nke nne na nna García Márquez, akwụkwọ akụkọ ahụ pụtara ihe nkiri mmegharị na 2007 starring Javier Bardem.
Dị ka mmiri maka Chocolate ...
Nịm n'oge mgbanwe nke Mexico, Dị ka mmiri maka chocolate ghọrọ onye a ma ama na mbipụta ya na 1989 ekele ikike Esquivel iji jikọta nnukwu akụkọ ịhụnanya na ihe ndị kwesịrị ekwesị. Ntụziaka zuru oke nke na-ekpughe Tita, nke ọdụdụ nke ụmụnne ya nwanyị niile, yabụ, katọrọ ịjụ ịhụnanya n'ịchụso nlekọta nke ndị mụrụ ya mgbe ọ na-esi nri niile e siri nri nke ezinụlọ, Nacha. Nnọchiteanya nke oge a nke kpokọtara n'ezieDị ka mmiri maka chọkọleti gosipụtara mmegharị ihe nkiri ama ama na 1992.
Anna Karenina, nke Leo Tolstoi dere
Isi nke Russia RealismAna Karenina bụ agwa nke Tólstoi ji weghachite ọha mmadụ dị elu nke Russia n'oge ahụ dị ka nkwenye nke ụwa ka mma na ime obodo. Ebube nke a na-ata ekweghị ekwe, ihe nzuzo na ụgha nke kpuchiri onye na-akwado akụkọ akụkọ ya malitere mgbe di nwanne ya nwanyị, Prince Stepan, kpọrọ ya Moscow. Agbanyeghi na izizi katọrọ ya dị ka ọrụ oyi n'ahụ ọha mmadụ, ndị agbata obi Tólstoi nwere mmasị Fyodor Dostoyevsky ma ọ bụ Vladimir Nabokov N'oge na-adịghị anya ha ruru eru ka ọ bụrụ ọrụ dị ọcha. Obi abụọ adịghị ya, otu n'ime akwụkwọ ịhụnanya kachasị mma.
South nke oke, ọdịda anyanwụ nke Sun, site n'aka Haruki Murakami
South nke ókè-ala, ka ...
Fọdụ nwere ike ghara ikwenye ma daberekwuo Badyo Tokyo, ma maka m akụkọ kachasị ịhụnanya banyere Haruki Murakami ga-anọgide na South nke ókè, ọdịda anyanwụ nke anyanwụ. Akụkọ banyere onye nwe ụlọ jazz mmanya Hajime, onye ndụ ya na-agbanye ngbanwe ogo 360 mgbe ejikọtara ya na Shimamoto, ezigbo enyi ya bụ nwata, bụ akụkọ dị mfe ma na-agbasi ike banyere oge gara aga nke nwere ike ịlaghachi mgbe niile dị ka oké ifufe nke na-ekpo ọkụ dịka enweghị atụ. Mmekọrịta chiri anya dị ọcha.
Akwụkwọ kacha mma Haruki Murakami
Dọkịta Zhivago, nke Borís Pasternak dere
Boris Pasternak: Dọkịta ...
Akụkọ banyere dọkịta Yuri Andréyevich Zhivago, nke e kenyere ndị agha n'oge Agha Worldwa Mbụ ebe ọ hụrụ nọọsụ Larisa n'anya ka e bipụtara na 1957 n'ọtụtụ ụwa. Otú ọ dị, nsogbu Pasternak zutere bụ nrụgide sitere na USSR ma mgbe ọ na-ebipụta akwụkwọ akụkọ ya na mpaghara Soviet (ọ mere ya na 1988) ma bụrụ onye Nobel chọr'inwe na Akwụkwọ na onye edemede meriri na 1958.
Kedu ihe ị bụ maka akwụkwọ ịhụnanya kacha mma n'akụkọ ihe mere eme?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Akwụkwọ ịhụnanya 10 kachasị mma n’akụkọ ihe mere eme iji mee ka ị daa n’ihu ọzọ
Ekpere nye Atọ n'Ime Otu nke Chineke iji dọta ndị M Hụrụ n'Anya
Oh, elu-igwe na chi-chi nke Nna Onye Okike, nke Ọkpara mgbapụta na Mmụọ Nsọ dị ebube! Alfa na Omega! Oh great Adonai! Goodnessdị mma na ebere gị na-enweghị ngwụcha ihe okike a ji obi umeala na-akpọrọ onwe ya ala (kwuo aha na aha nna gị) ma jiri obi gị niile rịọ gị (kwuo aha na aha onye ịchọrọ ịdọta) ka ị hụ m n'anya oge niile ma nwee ọ beụ n'akụkụ.
Jahel, Rosael, Ismael Oh, ndi di ike nke ihunanya! Chere maka onye m hụrụ n'anya ma mee ka mkpụrụ obi gị na-emesapụ aka na m yana na obi gị na-akụ naanị ịhụnanya naanị m. Jahel, Rosael, Ismael, gee m ntị ma nyere m aka. Otu a ka odi.
Na mmechi ekpere a, ikwesiri isi na nna anyi 9 na Maril Marys. Jiri okwukwe kpee ha ekpere ma tinye ha na saiti nke ichoro ka emezu ha.
Ndewo, aha m bụ Nadia Romero, abụ m nwa akwụkwọ nke ịzụ ahịa dijitalụ na imepụta ibe weebụ, Achọrọ m ịjụ gị ajụjụ ụfọdụ maka ọrụ nyocha anyị na-eme na klas, daalụ. Ana m echere azịza gị ozugbo.
Zaghachi Nadia Romero
Sarah onyeji dijo
Na-ekwenye kpamkpam na akwụkwọ ekpughere n'isiokwu a, ọkachasị mpako na ajọ mbunobi ^^
O nwere ụfọdụ ndị m na-agụbeghị ma m na-ede ha ka m gụọ ya ozugbo enwere ike.
Zaghachi Sarah Myers
A na-ahụta akwụkwọ edemede mbụ nke onye ode akwụkwọ Spanish-Peruvian bụ otu n’ime ihe atụ pụtara ìhè nke prose nke nyere onye edemede aka ịkatọ nrụgide nke ọha mmadụ na-eduga onye ahụ. Vargas Llosa, nke nyere onwe ya na nnwere onwe n'agbanyeghị na ndị ọzọ na-akatọ ya maka echiche ya na-agbanwe agbanwe nke eziokwu, na-akọ banyere mmechuihu na-eweda ndị agha agha n'okpuru ọzụzụ ha. Ọ bụrụ na ederede ederede masịrị gị, ị nwekwara ike inwe mmasị na: akwụkwọ 10 iji kwenye na ịhụnanya.
Zaghachi Julieta Michel
M ga-ekwusi ike na akwụkwọ akụkọ Hemingway Farewell to Arms, mmekọrịta ịhụnanya nke na-amalite n'etiti ndị na-akwado ya, onye agha na nwanyị ahụ na-arịa ọrịa, bụ naanị ihe na-adọrọ adọrọ na njedebe na-atụghị anya ya.
Taa, Nọvemba 10, Libbọchị Ọbọ akwụkwọ
Jo Nesbø: ndụmọdụ 10 sitere n'aka onye edemede Norwegian guzobere maka ndị edemede